नेपाली Archives - Page2of9- Aryamantavya
आर्य समाजका मान्यताहरु
December 17, 2017 प्रेम आर्य	Leaveacomment
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यदभद्रं तन्न आ सुव॥
(यजुर्वेद: ३०/३; ऋग्वेद: ५/८२/५)
(हे उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त परमेश्वर, हाम्रा समस्त दुष्टाचरण तथा दुःखहरु हटाएर कल्याण कारक, धर्मयुक्त आचरण तथा समस्त सुखहरु उत्पन्न गरि दिनुहोस् ।)
आर्यको अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ । आर्य समाजको अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ व्यक्तिहरुको समाज या संगठन । दुष्कर्म छोडेर शुभकर्म ग्रहण गर्ने इच्छा भएका हरेक व्यक्ति यस संगठनको सदस्य बन्न सक्छ । श्रेष्ठ व्यक्तिहरुको समुदायलाई दृढ राख्नको लागि महर्षि दयानंद सरस्वतिले यसका दस नियम बनाउनु भएकोछ जसलाई आर्य समाजका स्वर्ण नियमको रूपमा चिनिन्छ । जसबाट आर्य समाजको उद्देश्य तथा यसका सदस्यहरुको कार्यक्रमको बोध हुन्छ ।
ईश्वरको सर्वोतम निज नाम ओ३म् हो । उसमा अनंत गुण भएका कारण उसका ब्रहमा, महेश, विष्णु, गणेश, देवी, अग्नि, शनि, यम आदि अनंत नाम छन् । यिनै अलग-अलग गुणवाचक नाम बाट विविध मूर्ति स्थापना गरेर पूजा सुरु गर्नु ठीक हैन । आर्य समाजले वर्णव्यवस्था (अर्थात् ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्व र शूद्रलाई) कर्मनुसार मान्दछ, जन्मको आधारमा हैन। आर्य समाज स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसंस्कृति र स्वधर्मको पोषक हो ।
आर्य समाजले वसुधैव कुटुंबकमको सिद्धान्तलाई मान्दछ । तर भूमंडलीकरणलाई देश, समाज र संस्कृतिको लागि घातक मान्दछ। आर्य समाज वैदिक समाजको निर्माण तथा आर्य चक्रवर्ती राज्य स्थापित गर्नको लागि प्रयासरत छ । यस समाजमा मांसहार, मद्यपान, धुम्रपान, जुवा लगायत समस्त व्यसन वर्जित छ ।
वेद आर्य समाजको सर्व मान्य मूल ग्रंथ हो । वेदानुकुल उपनिषद, छ:दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, विशुद्ध रामायण, महाभारत र मनुस्मृति आदिलाई आर्य समाजले मान्दछ । आर्य समाजले ईश्वरलाई सर्वव्यापक एवम् निराकार मान्दछ।
आर्य समाजले सनातन वैदिक संस्कृति, संस्कार तथा नैतिकतालाई बढावा दिन्छ। आर्य समाजले हरेक समाजमा फैलिएका समस्त अंधविश्वास, कुरीति तथा पाखण्डलाई मान्दैन र यिनलाई जरै समेत नामेट पार्न कटिवद्ध छ। यो एक क्रान्तिकारी समाज सुधारक संगठन हो।
यसका १० स्वर्ण नियमहरु यसप्रकार छन्:-
१- सबै सत्यविद्या जो पदार्थविद्या को नाम ले चिनिन्छ, ति सब को आदिमूल ईश्वर हो।
२- ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, निर्विकार, अनन्त, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र तथा सृष्टिकर्ताहो. केवल उसैको मात्र उपासना गरौँ ।
३- वेद समस्त सत्यविद्याको भण्डार हो । वेद पढ्नु पढाउनु र सुन्नु सुनाउनु सब आर्यहरुको परम कर्तव्य हो ।
४- सत्य ग्रहण गर्न र असत्य त्याग्न सदा सर्वदा उद्यत रहौं।
५- सबै कार्य धर्मानुसार अर्थात् सत्यासत्यको विचार गरेर मात्र सुरु गरौँ ।
६- शारीरिक, आत्मिक र सामाजिक उन्नतिका साथै संसारको उपकार गर्नु यस समाजको मुख्य उद्देश्य हो ।
७- सबै संग प्रिती पूर्वक, धर्मानुसार, न्याय संगत, विवेकपूर्ण, यथायोग्य तथा आत्मवत् व्यवहार गरौँ ।
८- अविद्या नाश तथा विद्याको वृद्धि गरौँ ।
९- हरेकले आफ्नो उन्नतिमा मात्र सन्तुष्ट न रहेर सबैको उन्नतिमा नै आफ्नो उन्नति सम्झौं ।
१०- सबै मानिसहरु सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालनमा परतन्त्र तथा स्वहितकारी नियम मा स्वतन्त्र रहौं ।
December 16, 2017 प्रेम आर्य	4 Comments
येशु परम ज्ञानी हैन, महा मूर्ख थियो.!
December 3, 2017 प्रेम आर्य	Leaveacomment
येशु परम ज्ञानी हैन, महा मूर्ख थियो..!
येशु मांसाहारी थियो, मदिरा सेवन गर्ने गर्दथ्यो र झुटो पनि बोल्ने गर्दथ्यो। हाम्रो वैदिक धर्म र संस्कृति मान्ने समाजले यो कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन कि उसको परम श्रेष्ठ पुरुष मांसाहारी होस्, मदिरा सेवी होस् र झुटो बोल्ने गरोस्। जसमा यत्ति पनि करुणा नहोस् कि आफ्नो उदर पूर्तिको लागि कसैको जीवन बर्वाद गरोस्, जसले आफ्नो भोजनको लागि जीवनलाई यति अनादर गरोस्। जुन व्यक्ति मदिरा सेवी छ, उसलाई ध्यानको उच्चता प्राप्त हुने त प्रश्न नै उठ्दैन। मदिरा त अज्ञानीहरुले पिउने गर्दछन्, जो दुःखी छन्, तिनले पिउने गर्दछन्, जीवन देखि हैरान र व्याकुल भएकाहरुले पिउने गर्दछन्, तनाव बाट मुक्ति पाउने भनेर पिउने गर्दछन्। किनकि मदिराको गुण जो जुन अवस्थामा हुन्छ त्यसलाई भुलाइदिने हुन्छ। यदि कुनै व्यक्ति व्याकुल छ, पिडित छ, दुःखी छ भने मदिरा सेवन गरेर त्यसलाई क्षणिक बिर्सन्छ र अर्को दिन पुनः दुःख उही अवस्था फर्किन्छ। किनकि मदिराले दुःखलाई नामेट गर्दैन, केवल रनभुल्लमा पारिदिन्छ। ध्यानले दुःखलाई मेटाउँछ, रनभुल्लमा पार्दैन। ध्यान र मदिरा एकार्काका विरोधी हुन्।
ईसाई सम्प्रदायमा ध्यानको लागि कुनै स्थान छैन। तर आँफूलाई हिन्दुत्वका ठेकेदार सम्झने विवेकानन्द, योगानंद र रामतिर्थहरुले केवल पश्चिमी प्रसंशा पाउनकै लागि मात्र यो सम्झाउने कोशिस गरिरहे कि येशु पनि त्यहि कोटीमा आउँछन् जसमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, योगिराज श्रीकृष्ण, महात्मा बुद्ध तथा महाबिर आउँछन्। यो सरासर झुट थियो। हामि यो कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौं कि येशुका कुनै पनि वचनहरुमा त्यो उचाई छ जुन उपनिषद् मा छ, या उसको जीवनमा त्यस्तो कुनै खुवी छ जुन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, योगिराज श्रीकृष्ण तथा महात्मा बुद्धको जीवनमा छ।
उसका खुवीहरु असाधारण! यदि कुनै व्यक्ति पानि माथि हिंड्न सके पनि त्यो कुनै जादुगर हुन सक्ला। सायद ऊ कदापि पानी माथि हिँड्यो रे, यसको उल्लेख केवल ईसाइहरुको स्वयंको पुस्तक छोडेर कुनै अन्य पुस्तकमा छैन। प्रथम कुरो त हिंड्नै सक्दैन, यदि येशु पानी माथि हिँडे पनि यसमा कुन चाइ अध्यात्म छ? यदि यो सत्यहो भने पोपले कमसेकम कुनै स्विमिंग-पूल माथि नै हिँडेर देखाई दिनु पर्यो। स्विमिंग-पूल पनि छोडौं, उसको बाथ-टव माथि नै हिँडोस्, यति प्रमाण पनि येथेष्ठ होला किनकि ऊ प्रतिनिधि हो र अचुक छ उस् बाट कुनै भूल हुँदैन। यदि कुनै व्यक्ति पानी माथि हिँडेको भए पनि यसबाट अध्यात्मको के सम्बन्ध छ?
एक पटक रामकृष्णलाई भेट्न एक व्यक्ति पुग्यो, ऊ एक पुरानो योगी थियो, रामकृष्ण भन्दा उसको उमेर धेरै थियो, रामकृष्ण गङ्गा तटमा बसेका थिए, उस् व्यक्तिले आएर भन्यो कि – “मैले सुनेको छु, तिमीलाई मानिसहरुले पूज्ने गर्छन्, यदि साँच्चिकै तिम्रो जीवनमा अध्यात्म छ भने आऊ मसंग गङ्गामा हिंड” रामकृष्णले भने -“ थाकेका छौ, केहि बेर बस अनि फेरी हिँडौला, अहिले कहीं जाने आवस्यकता छैन र तब सम्म केहि थोरै परिचय पनि भैजाला, हाम्रो परिचय पनि भाछैन, पानीमा हिँड्न सिक्नमा तिमीलाई कति समय लाग्यो?” त्यसले भन्यो – “१८ वर्ष” रामकृष्ण हाँस्न थाले र भने -“म त पानीमा हिंडेको छैनकिनकि २ पैसामा गङ्गा पार गर्दछु, २ पैसाको काम १८ वर्षमा सिक्नु! म यो मूर्खता सम्झन्छु, अध्यात्म हैन। यसमा कुन चाइ अध्यात्म छ कि तिमि पानीमा हिंड्छौ? यसबाट तिमीले जीवनको कुन चाइ रहश्य पायौ?”
एक अर्को घटना येशुको सम्बन्धमा भन्ने गरिन्छ कि उसले एक मुर्दालाई जीवित गरेको थियो। अलिकति सोंच्ने कुरो छ कि मर्न त मानिसहरु दैनिक असंख्य मर्दछन्, जसले मुर्दालाई जीवित गर्न सक्दथ्यो तर केवल एकलाई मात्र जीवित गर्नु?! यो अलि आचार्यजनक कुरो छ कि उसले एउटालाई मात्र जीवित गर्यो र त्यो पनि उसको आफ्नै मित्र (लजारस) थियो। घटना बिल्कुल बनाइएको हो, लजारस एक गुफामा सुतेको थियो, येशुले बाहिर आएर आवाज दिन्छ कि लजारस उठ..! मृत्यु देखि बाहिर जीवनमा आऊ ! र लजारस तत्काल गुफा देखि बाहिर आउँछ। यसमा केहि कुरा बिचारनीय छ। सर्वप्रथम त यो व्यक्ति येशुको वाल्यकालको मित्र थियो, अर्को कुरो जुन व्यक्ति मरे पछी पुनः जीवित भएको होस्, यो ईश्वरीय नियम विपरित छ। यो घटना बाहेक लजारसको बारेमा पुनः कहीं कुनै उल्लेख पनि छैन। जब मरेको व्यक्तिलाई येशुले जीवित गर्न सक्थ्यो भने त फेरी संसारमा कसैलाई मर्न नै किन आवस्यकता थियो र?
यस घटनालाई यहाँ लिनुको कारण के भने ठिक यस्तै घटना महात्मा बुद्धको जिवनमा घटेको थियो। उनि एक पटक कुनै गाउँमा प्रवचन गर्न आएका थिए। त्यहाँ कुनै एक स्त्रीको पति, र अन्य सबै सन्तान मरेका थिए र एक छोरो, जसको सहाराले ऊ जिवित थिई, उसको भर्खरै मृत्यु भएको थियो। हामी सोंच्न सक्छौं उसको स्थिति, ऊ बिल्कुल विक्षिप्त भएकी थिई, प्रलाप गर्दै थिई। गाउलेहरुले सम्झाउने गर्दथे कि “प्रलाप गरेर केहि हुँदैन, बुद्धको आगमन भएको छ, यसको मृत शरीरलाई लैजा र बुद्धको चरणमा राखिदे र उनीसंग भन्नु कि तिमि त परम ज्ञानी छौ, यसलाई जीवित गरिदेऊ। मेरो त सबै साहारा छिन्न-भिन्न भयो, यहि एक छोराको सहारामा बाँच्दै थिएँ अब यो पनि गयो। अब त मेरो जीवनमा केहि पनि बचेन ।” त्यस स्त्रीले बुद्धकहाँ गएर त्यसै गरि । बुद्धले उस् स्त्रीलाई ध्यान संग हेरेर भने निश्चित नै तिम्रो छोरालाई आज साँझ सम्म म जीवित गरिदिन्छु, यसको लागि तिमीले पहिले एक सर्त पूरा गर्नु पर्ने छ, त्यो के भने तिमि आफ्नो गाउँमा जाऊ र कुनै पनि घर बाट एक मुठी तिल लिएर आउ । तर त्यो घर बाट ल्याउनु जहाँ कसैको मृत्यु नभएको होस् । वस् यति तिल ल्यायौ भने म तिम्रो छोरालाई जीवित पारि दिन्छु ।
त्यो विक्षिप्त स्त्री, स्वभावतः पागल हुने जस्तो स्थितिमा थिई, त्याहाँ बाट दौडी र यो घर, ऊ घर, सबैमा गई, सबैले भने कि तिमि एक मुठी तिलको कुरो गर्छ्यौ, हामि कहाँ भकारी भरि तिल छ, गाडी भरेर दिन सक्छौं, तिलको थुप्रो नै लगाई दिन सक्छौं तर के गर्ने, हाम्रो तिल तिमीलाई कुनै काम आउँदैनन् किनकि हाम्रो घरमा थाहा छैन, कति जनाको मृत्यु भैसकेको छ । साँझ हुँदा सम्म सबै गाउँलेहरुले उसलाई एकमात्र उत्तर दिए कि हाम्रो तिल तिमि जति सक्छ्यौ लैजाऊ तर यो तिम्रो कुनै कामको छैन । महात्मा बुद्धले निक्कै उल्टो सर्त लगाइदिए, यस्तो कुन घर होला जसमा कसैको मृत्यु नभएको होस्?
दिनभरिको अनुभव त्यस स्त्रिको जीवनमा क्रान्ति बन्यो । ऊ फिर्ता आइपुगी, उसले महात्मा बुद्धको चरण छोई र भनी कि “छोड्नुस्, अब बिर्सनुस् यस कुरालाई कि मेरो छोराको मृत्यु भयो, यहाँ जो पनि आएको छ उसलाई मर्नु नै पर्ने हुन्छ । तपाइले मलाई ठिक समयमा उचित शिक्षा दिनुभयो । अब म आफ्नो मृत्यु हुनु भन्दा पहिले यो जान्न चाहन्छु कि त्यो कुन हो जो म भित्र जीवन छ? मलाई दीक्षा दिनुस् ।
जो स्त्री आफ्नो छोराको जीवन माग्न आएकी थिई, ऊ आफ्नो जीवन संग परिचित हुने प्रार्थना लिएर उपस्थित भई । ऊ सन्यासिनी बनी । र महात्मा बुद्धका जो शिष्य परम अवस्था प्राप्त भएका थिए, ति मध्ये ऊ अग्रणी थिई । यहि नै क्रान्ति हो । यदि महात्मा बुद्धले उस्को छोरालाई जीवित गरिदिएको भए पनि के हुने थियो? एक दिन त ऊ अबस्य मर्ने नै थियो ।
लजारस पनि एकदिन पक्कै पनि मर्यो होला । तर बुद्धले त्यस स्थितिलाई एक अध्यात्मिक मोंड, एक नयाँ आयाम दिए; यो उनको बुद्धत्व हो। हामीहरु हरेक वस्तुलाई केवल बाहिरि तथा सतही दृष्टिले मात्र देख्ने गर्दैनौं । म मान्छु कि बुद्धले जे गरे त्यो महान थियो र येशुले जे पर्यो त्यो साधारण । त्यसको कुनै मूल्य छैन। यहि फरक छ, पूर्व र पश्चिमको सोंचमा ।
पश्चिम यहि सोंचले अहिले पनि ग्रसित छ र ऊ सदा पूर्वको दृष्टिकोण बाट डराउँछ र आत्तिन्छ । किनकि पश्चिमको मान्यता छ कि पूर्व गरिब छ, ईसाई मिसिनरी पठाऊ र गरिबहरुलाई ईसाई बनाऊ । र लाखौँ मानिसहरु ईसाई बन्दै छन् पनि । तर जुन मानिसहरु ईसाई बन्दैछन् पूर्वमा, ति सब गरिब हुन्, भिखारी हुन्, अनाथ हुन्, आदिवाशी हुन्, भोका हुन्, नाङ्गा हुन्, तिनलाई धर्म संग कुनै सम्बन्ध छैन, उनलाई विद्यालय चाहिएको छ, अस्पताल चाहिएको छ, औषधि चाहिएको छ, उनका सन्तानहरुको लागि शिक्षा चाहिएको छ, कपडा चाहीएको छ, भोजन चाहिएको छ । ईसाईले कपडा र रोटिले उनको धर्म खरिद गर्दै छ ।
पश्चिममा कुनै भिख माग्नेहरुको कमि छैन, केवल अम्रिकामा मात्र अहिले लगभग पाँच करोड गरिब छन् । जो संसार भरिका अन्य गरिबहरुलाई ईसाई बनाउनमा लागेका छन्, तिनले आफ्ना गरिबहरको लागि केहि पनि गर्दैनन् किनकि ति ईसाई नै हुन् ।
हे ईसाईहरुहो! हामि सत्य सनातन वैदिक धर्मिहरुले तिमिहरुलाई यो चेतावनी दिन चाहन्छौं कि तिमीहरुले जेलाई धर्म भनिरहेका छौ, त्यो धर्म हैन र जो धर्म हो, त्यसको तिमीहरुलाई अवगत पनि छैन ।
स्वभावतःतिमीहरुलाई वेद देखि शत्रुता छ, किनकि त्यसमा सृष्टिको सत्यता लुकेको छ र तिमीहरु सत्य देखि अलग्गै रहन चाहन्छौ र संसारलाई अन्धकार मै राख्न चाहन्छौ। तिम्रो लागि वेद शब्द नै एक खतराको संकेत हो किनकि वेदले तिम्रो ठेकेदारी नैतिकता नष्ट गर्दिन्छ, तिम्रो कमाइ खाने भाँडो फुटाइदिन्छ, तिम्रो धर्म नष्ट गरिदिन्छ, नष्ट हुन्छ तिम्रो दुई हजार वर्षको मेहनत..! यदि त्यो मेहनत बचाउन योग्य नै छैन भने त्यसलाई नष्ट हुन देऊ र आऊ वेदको सितल छहारीमा ..! अस्तु..